WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥပဒေမူကြမ်းကို ဖတ်ရှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥပဒေမူကြမ်းကို ဖတ်ရှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။
အင်ဂျင်နီယာ အားလုံး ကျေးဇူးပြုပြီး ဖတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Share ပေးကြပါ။
မသိသေးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ အများကြီးပါ။
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားကျောင်းသူများ သိစေရန် ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇန်န၀ါရီ ၂၅ရက်နေ့ မှာ post တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာများနဲ့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများ ကြား ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖော်ပြပါ ဥပဒေဟာ လွတ်တော်မှာ တင်သွင်းပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဆရာအေးငြိမ်းရဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ချက်ကို အင်ဂျင်နီယာများ လေ့လာနိုင်ရန် ထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - Aye Nyein
(၂) မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥပဒေမူကြမ်း -
စက်ရုံများမှ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များအတွင်း စွန့်ထုတ်နေသည့် ရေဆိုးများကို မည်ကဲ့သို့ပြုပြင်ရမည်။ မြစ်ချောင်းများ အတွင်း စီးဝင်ရမည့်ရေသည် အရည်အသွေးမည်မျှရှိရမည်။ အဆောက်အဦးများ၏ မီးကာကွယ်ရေး စနစ်ကို မည်ကဲ့သို့ တပ်ဆင်ရမည်။ မြို့ကြီးများတွင် မည်ကဲ့သို့သော ရေဆိုးထုတ်စနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ရမည်။ အိမ်သာစနစ်ကို မည်ကဲ့သို့ စီမံထားရမည်။ အမှိုက်များ သိမ်းဆည်း စွန့်ပစ်ရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ စီမံမည်။ မော်တော်ကားများ၏ မီးခိုးများ ထုတ်လွှတ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းမည်။ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များအတွင်း အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်နေမှုကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းရမည်။ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေး၊ ကြွက်သတ်ဆေးများကို မှတ်ပုံတင်ရန် စီမံပြီးပါပြီလား။
ထိုဓါတုဗေဒပစ္စည်းများအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် Safety Data Sheet ထုတ်ဝေကာ ရောင်းချသူတိုင်းကို ပေးရန်။ ထိုရောင်းချသူတိုင်းအား နားလည်အောင် သင်တန်းပေးရန်။ ဆေးရောင်းတိုင်း ၀ယ်သူများအား ထို SDS ကို ပေးရန်။ ၀ယ်သူနားလည်အောင် ရှင်းပြရန်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် တူတူတန်တန် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်စာအုပ်များ ထုတ်ဝေရန် - - - ။
Credit HH Sein FB.
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 1:09 AM
DVB Roadshow #10 - ကြေးနီကျိန်စာနှင့် အဆိပ်သင့် သံ...
Moral Purpose at schools
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကော...
“ညောင်ရေသွန်း ပွဲတော် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း နှင့် ညောင်...
ပန်ဆန်း သို့မဟုတ် ဝမြို့တော် ဓာတ်ပုံ - ဂျေပိုင် ...